VerbalizeIt: App, Qoraal, Maqal iyo Fasiraad Fiidiyow | Martech Zone
Axad, Abriil 20, 2014 Douglas Karr
Waa VerbalizeIt barxadda tarjumaadda ayaa marin u ah waxyaabaha aad soo gelisay bey'ad daaweyneysa turjumaadda, dib-u-eegista iyo soo celinta 24-48 saacadood gudahood. Kaliya 10% ugu sareeya ee codsadayaasha uqalma ayaa lagu casuumay inay kaqeybqaataan bulshada tarjumaada isla markaana jawaab celin laga helo hogaaminta bulshada VerbalizeIt, macaamiisha iyo tijaabooyinka isdaba jooga ah ayaa loo adeegsadaa si loo hubiyo inay abaalmariyaan turjubaano tayo sare leh, tababaraan turjubaano heer sare ah, iyo ka guurida kuwa liita .
VerbalizeIt waxay kaa caawin kartaa shirkadaha tarjumaadda qoraalka, tarjumaadda maqalka, tarjumaadda fiidiyowga xitaa waxay kaa caawin kartaa inaad turjunto moobilkaaga ama arjigaaga webka. Tani waa fursad aan caadi aheyn ganacsigaaga si aad ugu ballaariso adduunka oo dhan ugana faa'iideysato hirgelinta luuqado badan iyadoo aan lagu darin kharashka shirkad caalami ah.
Tags: tarjumaadahadal sheegid
Anatomy ee dhacdo dhameystiran